Batsira Vana Kuti Vakurire Miedzo
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Korean Krio Kwanyama Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Maya Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuRussia Norwegian Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tatar Thai Tiv Tongan Tsonga Turkmen Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
PANE munhu akambokukumbira kuita chimwe chinhu chakanga chisina kururama here?— Akakumanikidza kuti uchiite here? Kana kuti akataura kuti chaizova chinhu chinonakidza uye kuti paisaizova nechakaipa chaicho pakuchiita here?— Mumwe munhu paanodaro kwatiri, anenge achitiedza.
Tinofanira kuita sei kana tikaedzwa? Tinofanira kubvuma toita zvisina kururama here?— Izvozvo hazvingafadzi Jehovha Mwari. Asi unoziva here kuti ndiani angafara?— Hungu, Satani Dhiyabhorosi angafara.
Satani muvengi waMwari, uye Satani muvengi wedu. Hatigoni kumuona nokuti mudzimu. Asi anogona kutiona. Rimwe zuva Dhiyabhorosi akataura naJesu, Mudzidzisi Mukuru, achida kumuedza. Ngationei kuti Jesu akaitei. Tikadaro tichaziva zvinhu zvakarurama zvokuita kana tikaedzwa.
Jesu angave akatanga kuyeuka chii paakabhabhatidzwa?
Jesu aida kuita kuda kwaMwari nguva dzose. Akaratidza izvi pa- chena nokubhabhatidzwa muRwizi rweJodhani. Jesu akanga achangobva kubhabhatidzwa apo Satani akamuedza. Bhaibheri rinoti “matenga akazaruka” kuna Jesu. (Ma- teu 3:16) Izvi zvingangoreva kuti Jesu zvino akatanga kuyeuka zvose pamusoro poupenyu hwake hwokutanga ari mudenga naMwari.
Abhabhatidzwa Jesu akaenda musango kuti anofunga pamusoro pezvinhu zvaakanga atanga kuyeuka. Kwakapera mazuva nousiku makumi mana. Nguva yose iyi Jesu haana chaakadya, naizvozvo zvino akanga ava kunzwa nzara zvikuru. Pakanga pari panguva ino apo Satani akaedza Jesu.
Dhiyabhorosi akashandisa sei matombo kuedza Jesu?
Dhiyabhorosi akati: “Kana uri mwanakomana waMwari, udza matombo aya kuti ave zvingwa.” Chingwa chingadai chakava chinonaka kwazvo! Asi Jesu aigona kudai akachinja matombo akava chingwa here?— Hungu, aigona kudaro. Nei? Nokuti Jesu, Mwanakomana waMwari, aiva nesimba rinoshamisa.
Waizodai wakaita kuti dombo rive chingwa kudai Dhiyabhorosi akanga akukumbira kudaro here?— Jesu aiva nenzara. Naizvozvo pangadai pakava nechakaipa here kungozviita kamwe chete?— Jesu aiziva kuti zvakanga zvisina kururama kushandisa masimba ake nenzira iyoyo. Jehovha akanga amupa masimba iwayo kuti aswededze vanhu kuna Mwari, kwete kuashandisa nokuda kwake pachake.
Naizvozvo pane kudaro, Jesu akaudza Satani zvakanyorwa muBhaibheri kuti: ‘Munhu anofanira kurarama, kwete nechingwa choga, asi nokutaura kwose kunobuda mumuromo maJehovha.’ Jesu aiziva kuti kuita zvinofadza Jehovha kunotokosha zvikuru kupfuura kuva nezvokudya.
Asi Dhiyabhorosi akaedza zvekare. Akatora Jesu akamuendesa kuJerusarema ndokumuita kuti amire pakakwirira petemberi. Zvadaro Satani akati: ‘Kana uri mwanakomana waMwari, zviwisire pasi kubva pano. Nokuti zvakanyorwa kuti ngirozi dzaMwari dzichakudzivirira kuti usakuvara.’
Nei Satani akataura izvi?— Akazvitaura kuti aedze Jesu kuti aite chimwe chinhu choupenzi. Asi zvekare Jesu haana kuteerera Satani. Akaudza Satani kuti: “Zvakanyorwa kuti, ‘Haufaniri kuedza Jehovha Mwari wako.’” Jesu aizviziva kuti zvakanga zvisina kururama kuedza Jehovha nokuisa upenyu hwake mungozi.
Kunyange zvakadaro, Satani haana kumurega. Kubva ipapo akatora Jesu akamuendesa mugomo refurefu. Imomo akamuratidza umambo hwose, kana kuti hurumende dzenyika nembiri yadzo. Ipapo Satani akati kuna Jesu: ‘Ndichakupa zvinhu zvose izvi kana ukapfugama pasi wondinamata kamwe chete.’
Funga nezvezvakavimbiswa naDhiyabhorosi. Umambo hwose uhwu, kana kuti hurumende dzevanhu, dzakanga dziri dzaSatani zvechokwadi here?— Jesu haana kuramba kuti dzakanga dziri dzaSatani. Aizodai akaramba kudai dzakanga dzisiri dzaSatani. Satani ndiye mutongi chaiye wemarudzi ose ari panyika. Bhaibheri rinotomudana kuti “mutongi wenyika ino.”—Johani 12:31.
Nei Satani aigona kupa Jesu umambo hwose uhwu?
Waizoita sei kudai Dhiyabhorosi aizokuvimbisa chimwe chinhu kana waizomunamata?— Jesu aiziva kuti zvakanga zvisina kururama kunamata Dhiyabhorosi pasinei nokuti aizowanei. Naizvozvo Jesu akati: ‘Ibva, Satani! Nokuti Bhaibheri rinoti ndiJehovha Mwari wako waunofanira kunamata, uye ndiye oga waunofanira kushumira.’—Mateu 4:1-10; Ruka 4:1-13.
Uchaitei kana ukaedzwa?
Nesuwo takatarisana nemiedzo. Unoziva mimwe yacho here?— Houno muenzaniso. Amai vako vangabika keke rinonaka rokuti museredzere mapedza kudya. Vangakuudza kuti usamboridya kusvika nguva yokudya yakwana. Asi unenge une nzara kwazvo, saka unganzwa uchida kuridya. Uchateerera amai vako here?— Satani anoda kuti usavateerera.
Yeuka kuti Jesu aivawo nenzara zvikuru. Asi aiziva kuti kufadza Mwari ndiko kwainyanya kukosha kupfuura kudya. Unoratidza kuti wakaita saJesu paunoita zvinotaurwa naamai vako.
Vamwe vana vanogona kukufurira kuti umedze mapiritsi orumwe rudzi. Vangakuudza kuti achakuita kuti unzwe uchinakidzwa. Asi mapiritsi aya anodaro ari zvinhu zvinodhaka. Anogona kukurwarisa chaizvo uye angatokuuraya. Kana kuti mumwe munhu angakupa mudzanga, ungavewo nezvinodhaka, okumanikidza kuti uusvute. Uchaita sei?—
Funga nezvaJesu. Satani akaedza kuita kuti Jesu aise upenyu hwake mungozi nokumuudza kuti asvetuke achibva pamusoro petemberi. Asi Jesu haana kuzviita. Uchaita sei kana mumwe munhu akakumanikidza kuita chimwe chinhu chine ngozi?— Jesu haana kuteerera Satani. Newewo haufaniri kuteerera chero munhu anoedza kukuita kuti uite zvinhu zvisina kururama.
Nei zvisina kururama kushandisa zvifananidzo pakunamata?
Rimwe zuva unogona kunzi unamate chifananidzo, chinhu icho Bhaibheri rinoti hatifaniri kuita. (Eksodho 20:4, 5) Zvichida mutambo unoitwa kuchikoro. Ungaudzwa kuti hauzobvumirwi kuramba uchipinda chikoro kana ukaramba kuita izvi. Uchaitei?—
Zviri nyore kuita zvakarurama kana munhu wose ari kuzviita. Asi kuita zvakarurama kunogona kuva kwakaoma zvikuru kana vamwe vari kuedza kutimanikidza kuita zvisina kururama. Vangataura kuti zvavari kuita hazvina kuipa chaizvo. Asi mubvunzo mukuru ndowokuti, Mwari anoti chii pamusoro pazvo? Iye ndiye anonyatsoziva.
Naizvozvo pasinei nokuti vamwe vanoti chii, hatifaniri kumboita zvinhu izvo Mwari anoti hazvina kururama. Nenzira iyoyo tichaita kuti Mwari afare nguva dzose, uye hatizombofi takafadza Dhiyabhorosi.
Mamwe mashoko pamusoro pokuti ungaramba sei muedzo wokuita zvisina kururama anogona kuwanikwa pana Pisarema 1:1, 2; Zvirevo 1:10, 11; Mateu 26:41; na2 Timoti 2:22.
Ona kuti zvii zvaungaita kuti uderedze nguva yaunopedza uri pane vanhu vanoita kuti upinde mumuedzo.